खेल र फिटनेस, योग
एक सफल जीवनको सूत्र सरल छ! तपाईं, स्वस्थ बलियो हुन र राम्रो आकार र मुड कायम हुनुपर्छ। तर, अनन्त तनाव, काम दिनचर्या र यसलाई लागू गर्न दैनिक जीवनको छिटो गति धेरै गाह्रो हुन सक्छ। सहायता शक्ति योग आउँछ। यो मानव शरीर मा एक मजबूत सकारात्मक प्रभाव छ जो प्राचीन पूर्वी अभ्यास आधारित आधुनिक रुझान को छ। हामीलाई यसको सुविधा र प्रविधि जाँचौं।
त्यहाँ शरीर को मांसपेशिहरु बलियो बनाउन धेरै तरिकाहरू छन्। वजन प्रशिक्षण, रसायन र सक्रिय खेल सजिलै उपलब्ध विकल्प हो। तर, पहिलो तरिका चाँडै बाहिर musculoskeletal सिस्टम पहनता गर्न, दोस्रो राम्रो भन्दा बढी हानि वहन र तेस्रो उमेर प्रतिबन्ध छ। कुनै साइड इफेक्ट छ जो एक वैकल्पिक, शारीरिक र साँस अभ्यास को एक विशेष सेट रूपमा विकास गरिएको छ। त्यसपछि, उहाँले "शक्ति योग" (वा शक्ति योग) भनिन्थ्यो।
दिशा 1995 मा सिर्जना गरिएको थियो अमेरिकी Beryl बर्च। किनभने asanas शक्ति को कार्यान्वयन मा जोर को यो अक्सर Ashtanga Vinyasa प्रणाली संग correlated छ। संसारभरि समय एक अपेक्षाकृत छोटो अवधिमा शक्ति योग फैलियो। उनको आज रूस मा विशेष कल्याण कार्यक्रम समावेश परिसर।
यो अभ्यास को एक विशेषता सुविधा लगातार अभ्यास को एक श्रृंखला, परस्पर गतिशील हड्डी जोड्ने तन्तु प्रदर्शन हो। कक्षाहरू बढी लक्षित थिए र केन्द्रित गर्न, तिनीहरूले द्वारा चिल्लो, नरमररुपले सहायक संगीत सँगसँगै छन्। गतिशील गुच्छा अन्तर्गत शारीरिक बल र शान्त श्वास ताल पुनर्स्थापना डिजाइन Pranayama बुझे।
को पेशी कंकाल र हड्डी र बंधन बलियो बनाउन - शक्ति योग को मुख्य उद्देश्य। गतिशील अभ्यास जोडहरुको कस्नु र लचिलो हुन र एक स्वस्थ, सुन्दर मुद्रा कायम गर्न मेरुदण्ड अनुमति दिन्छ छैन। ब्यालेन्स मा अभ्यास समन्वय सुधार। सामान्य मा, अभ्यास गर्ने हृदय र स्नायु प्रणाली सकारात्मक प्रभाव छ। यो हरेक दिन, भावनात्मक यो गराउँछ थकान गर्न सकिन्छ त्यसको विपरीत, समग्र टोन र मुड बढ्छ।
शक्ति योग उत्पादन जो बाह्य प्रभाव, बारे मा भूल छैन। नियमित व्यायाम र दृष्टिकोण संख्या मा एक क्रमिक वृद्धि र लोड फारम पुष्ट आंकडा को डिग्री। यो आफ्नै शरीर को वजन बाहेक थप गोले आवश्यकता छैन।
बरु dieting को
व्यवहार पुरुष र महिला लागि उत्तिकै लाभदायी छ। यो निर्देशन सही साँस संग संयुक्त सक्रिय अभ्यास चाँडै महिला आंकडा ठूलो अनुग्रह, लचीलापन र स्त्रीत्व बनाउने, अतिरिक्त वजन हटाउन रूपमा ", वजन लागि शक्ति योग" को स्वराङ्कित कारण बिना छैन। यो योग, आफैमा अवस्थित छैन भनेर अलग्गै मा उल्लेखनीय छ, र एक स्वस्थ आहार यसको अभ्यास वितरण। सुझाव योग्य प्रशिक्षकहरु मात्र अभ्यास को सही कार्यान्वयन छैन मदत, तर पनि एक स्वस्थ आहार को गठन मा हुनेछ।
मानिसहरू शक्ति योग महिला भन्दा फरक एक सानो काम गर्दछ। को जोर यहाँ अधिक पेशी फ्रेम को विकास मा पतन र धीरज वृद्धि। लचीलापन, संयुक्त गतिशीलता सुधार गर्छ। यो क्रमिक निको प्रभाव र यसलाई शारीरिक गतिविधि शक्ति योग अन्य प्रकार फरक छ। कसरत पारंपरिक पम्पिंग मांसपेशीमा, एक स्थिर राहत पहाड मा एक मानिस बारी, शक्ति योग अभ्यास अर्कोतर्फ, शरीर लचीलापन, आन्दोलन सजिलो राख्छ को परिचर अधिग्रहण सजिलै देखिने मांसपेशी बल संग।
होने शक्ति योग को उपयोगी गुण को एक विशाल सूची संग familiarized, शायद, सबैलाई यो अद्भुत अभ्यास मा प्रवेश गर्न चाहन्छ। तर, केही कमियां वा यो दिशा मा सीमितता, reckoned गर्न जो संग छन्। पहिले, यो तयारी छ। बल प्रशिक्षण, कुनै कुरा तिनीहरूले पक्ष बाट लाग्न सक्छ कसरी सरल, एकदम जटिल र सुधार विशेषज्ञ आवश्यक पर्दछ। मात्र एक शक्ति योग प्रशिक्षक आन्तरिक मांसपेशीमा बाह्य संग मात्र, तर पनि काम गर्ने अधिकार सुरु मद्दत गर्न सक्छ।
एक जटिल अभ्यास - पनि मन मा छ कि योग राख्नुहोस्। यो आफ्नो मानसिक र शारीरिक सक्षमता को खुलासा धेरै चरणमा हुन्छन्। तसर्थ, hatha योग र Pranayama को प्रारम्भिक कौशल बाइपास, शक्ति योग सीधा अगाडि बढ्न, यो बस असंगत छ।
तथापि, शुरुआती लागि शक्ति योग कक्षाहरू सुरु गर्ने निर्णय भने, तपाईं यस्तो प्रशिक्षण मा आशा के आफैलाई सेट गर्न आवश्यक छ। Pranayama गहिरो पेट साँस को अभ्यास केन्द्रित, शारीरिक पक्ष - को ढलान र बिभिन्नविचलन, पुस-अप, उठबस, तख्तें र बाहिर आक्रमण पूरा मा।
शुरुआती लागि जटिल
रुझान को निर्माता, Beryl बर्च विशेष धेरै चरणमा विकसित, वा जो विभिन्न शारीरिक विशेषताहरु चिकित्सकहरु अनुरूप कठिनाई को स्तर। यसरी, शुरुआती लागि शक्ति योग सात अभ्यास को एक सेट समावेश, बिस्तारै फरक मांसपेशी समूहहरु काम गरे। पहिलो, लोड खुट्टा मांसपेशीमा जान्छ।
सुमो wrestler पोज
प्रदर्शन प्रविधी: राख्नु खुट्टा व्यापक (70-90 सेमी), खुट्टा छेउमा मा फैलाउनु, Palms नमस्ते मा छाती स्तरमा सामेल (पूर्व अभिवादन)। को घुँडा मा खुट्टा मोड्नु र तल पर्छ। जांघ गर्दा बाहिरबाट unfolding।
प्रदर्शन को प्रविधी: अगाडि एक कदम-lunge लिन। अगाडि खुट्टा अधिकार कोण, पछाडि गर्न झुकेको छ - सीधा, को एडी तल्ला गर्न थिचिएको। हात मोड्नु, कोहनी फिर्ता पठाइरहेका छन्। पाम clenched। यो व्यायाम मा मुख्य कुरा हो - समान रूप शरीरको वजन वितरण। अन्य खुट्टा मा नै दोहोरिने।
अब तपाईं triceps खेती अगाडि बढ्न सक्छ।
छ अंक पोज
प्रदर्शन को प्रविधी: को खतरा स्थिति लिन। तल्ला पैन माथि उठाएर छ, स्टप को घुँडा हुन्छ। को कोहनी मा शरीर मोड्नु साथ हतियार। को Palms आफ्नो मुनि हुनुपर्छ। त्यसैले 5-10 सेमी को तल्ला देखि पृथक आवास शरीर, स्थिति को छ अंक :. मोजा मा आधारित छ (2), गोडा (2) र हात (2)।
को जाने हातमा को मांसपेशिहरु लागि अभ्यास र deltoid मांसपेशी।
प्रविधी: आफ्नो दाहिने खुट्टा संग अगाडी एक lunge गरिरहेको। बायाँ हात लम्ब भुइँमा खिचडी र राखे। को खुट्टा को बाहिरी किनारा धारण - हामी सही खुट्टा र बायाँ खोल्दै गर्दा, दायाँ शरीर विस्तार। माथि कोरिएका छन् दाहिने सन्तुलनमा गर्न, आफ्नो पेट मांसपेशीमा कस र अगाडी श्रोणि धक्का। एउटै व्यायाम अन्य पक्षमा गरेको छ।
अब व्यायाम को पाखुरा र भुँडी को मांसपेशिहरु समेट्छ।
प्रविधी: पेट मा झूठ, तपाईंको कोहनी मोड। तिनीहरूले बिल्कुल मुनि हुनुपर्छ। शरीर, श्रोणि र खुट्टा भुइँमा बन्द लिफ्टहरु। समर्थन अंक को कोहनी र औंलाहरूको छन्। हामी भुँडी र चाक straining मा आकर्षित। शरीर को भाग र मा खुट्टा सिधा रेखा को हुनुपर्छ।
र, पेट मांसपेशीमा र फिर्ता बलियो बनाउन जटिल अभ्यास पहनाया।
प्रविधी: आफ्नो पछाडि झूठ को कस तल्ला गर्न थिचिएको संग लगभग 10 सेमी कमर सीधा दुवै खुट्टा र शरीर उचाल्न .. हात, पेट मांसपेशीमा straining, खुट्टा लागि पुग्न।
प्रविधी अघिल्लो व्यायाम समान छ: आफ्नो पेट मा सुत्न, खुट्टा र शरीर दुवै उठाउनु। घाँटी मेरुदण्ड लाइन (विश्रामहरू बिना) जारी छ। फिर्ता र माथि खींच हात, को खुट्टा सँगै आयोजना गरिन्छ।
भर जटिल ताल साँस संरक्षित र गहिरो गर्नुपर्छ। समय द्वारा अभ्यास 15 मिनेट भन्दा कुनै लिन्छन्। एक तनावमुक्त shavasana (मुद्रा लास) मा झूठ पानी र केही मिनेट पिउन आवश्यक प्रदर्शन पछि।
व्यायाम यस प्रकारको एक निश्चित आवश्यक फिटनेस। तसर्थ, शुरुआती तनाव सामना गर्न सुरुमा धेरै गाह्रो हो। व्यवहार मा सहज अप कक्षाहरू सुरु गर्न भएका पुरुष र महिला सक्रिय जीवन शैली नेतृत्व वा शक्ति खेल मा लगे गरिएको छ लाग्छ। तैपनि, नडराऊ, यस्तो आधार त्यहाँ भने। मध्यम लोड क्षमता शक्ति योग इच्छित दर गर्न प्रवेश र तीव्र मिलाइएको केन्द्रित छ। आज, भिडियो, पाठ्यक्रम रेकर्ड कि अनुभवी मान्छे स्वतन्त्र जटिल शक्ति योग गर्न अनुमति धेरै छन्।
कसरी लोटस स्थिति बस्न? कसरी लोटस स्थिति बस्न?
कथाको शीर्षकको अर्थ "कप्तानको छोरी" हो। माशा Mironova को छवि
एक ढक्कन संग प्लास्टिक खाना कन्टेनर कसरी छनौट गर्ने?
"Semax": analogues, आफ्नो तुलना र समीक्षा
Crumbled छाया पुनस्थापित।
Nikolaev Aleksey: छोटो जीवनी र रचनात्मकता
सपना मा, म एक पानीको सानो खाडल भेट? सपना पुस्तक तपाईं बुझ्न मदत गर्नेछ